သက်ဝေ: လွင့်မျော မြစ်တစင်း
Sunny November 12, 2010 at 12:16 AM
khin oo may November 12, 2010 at 12:27 AM
ံ့Happy Anniversary !
ThuHninSee November 12, 2010 at 2:38 AM
အားကျဖွယ်..သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ ဘ၀လေးကို အမြဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
Happy Anniversary!...:D Gyidaw
Vista November 12, 2010 at 7:59 AM
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်ပါစေ မမရေ
စုချစ် November 12, 2010 at 7:59 AM
အစ်မတို့ ဇနီးမောင်နှံ ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်ကြည်နှုး ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာများ ပို့သလျက်...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 12, 2010 at 8:34 AM
Thant November 12, 2010 at 9:32 AM
Mon Petit Avatar November 12, 2010 at 9:35 AM
sonata-cantata November 12, 2010 at 9:43 AM
သက်ဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံ မင်္ဂလာများ ဆထက်တပိုး တိုးလို့ ဆောင်နိုင်ကြပါစေ...:)
ဒီနေ့မှာ မသီတာလည်း ပို့စ် တင်ဖြစ်အောင်တင်ရမှာပါ
ကိုဧရာ့ မွေးနေ့လေ ... :)
နှစ်ထပ်ကွမ်း အပြုံး ချိုချိုလေး ပြုံးသွားတယ်...
ချစ်ကြည်ရဲ့ လက်ဆောင် ကဗျာကလည်း ကောင်း...:)
သုံးထပ်ကွမ်း ပြုံးလိုက်ပြန်ပြီ :)))
Thandar Lwin November 12, 2010 at 9:50 AM
ပျော်ရွှင်စ၇ာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်ပါစေ အမေ၇။
ယနေ့ မှစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် အတူလက်တွဲပြီး ကျန်းမာခြင်း ချမ်းသာခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဘဝလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့.................
မေဇင် November 12, 2010 at 10:18 AM
Happy Anniversary....... ပျော်ရွှင်စရာနှစ်ပတ်လည်နေ့ ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ခွန်မြလှိုင် November 12, 2010 at 1:37 PM
မမသက်ဝေတို့ မိသားစု ရာသက်ပန် ခိုင်မြဲ ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲရင်း ချစ်တဲ့ မြေမှာ ချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ တူတူ နေနိုင်ပါစေ။
nu-san November 12, 2010 at 2:13 PM
TURN-ON-IDEAS November 12, 2010 at 3:08 PM
Sister, please accept my belated wish.
...Wishing "From here to Eternity"...
မိုးငွေ့...... November 12, 2010 at 5:44 PM
ချစ်ချစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ မမသက်ဝေ...
စုလတ်(ညီမလေး) November 12, 2010 at 6:43 PM
အမ... ဆထက်တိုးလို့ ချစ်သက်တမ်းတွေ ရှည်ပါစေ ....
မောင်လေး November 12, 2010 at 8:20 PM
"Happy Anniversary" ပါ အစ်မရေ....
ပန်းခရမ်းပြာ November 12, 2010 at 9:37 PM
Happy Anniversary ပါ မသက်ဝေ ...
အပြုံးပန်း November 12, 2010 at 9:37 PM
ယနေ့မှ နှစ်တစ်ရာတိုင်ပါ အမ၊
မချစ်ကြည်အေးရဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင်ကလည်း သိပ်လှ သိပ်နူးညံ့တာပဲ။
MrDBA November 12, 2010 at 9:40 PM
Happy Anniversary ! ပါဗျား။
အသက် ရာကျော်ရှည်၍ ကလေးရာကျော်နဲ့ မိသားစု အကြီးကြီးဖြင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေခင်ည။
T T Sweet November 12, 2010 at 9:49 PM
ချစ်သူငယ်ချင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကြည်နူးဖွယ် အချစ် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပါစေ။
သူငယ်ချင်းတို့ မောင်နှံအတွက် သီချင်းလက်ဆောင်
rose of sharon November 13, 2010 at 9:12 AM
အင်ကြင်းသန့် November 13, 2010 at 7:33 PM
Happy Anniversary ပါ မမသက်ဝေ....
ကဗျာဆရာမကလည်း လက်စွမ်းထက်မှထက်...။း))
“စာမရေးဖြစ်တာ ကြာပြီ…။ အလုပ်များတယ်လို့ ခဏခဏပြောရတာလဲ ရှက်စရာတောင်ကောင်းနေတယ်။”
Min November 13, 2010 at 10:23 PM
Built your dreams together till last breath...
ZZZ November 15, 2010 at 8:30 PM
အနှစ်အရသာရှိသော အချစ်ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ ...
မသက်ဝေနှင့် မိသားစုကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ..
Moe Cho Thinn November 17, 2010 at 10:00 AM
စီးဆင်းနိုင်ပါစေ ကိုကြီးနဲ့ မမသက်ဝေ။
ဇွန်မိုးစက် November 17, 2010 at 1:20 PM
Sorry for my belated wish, sis.
With memories to treasure.'
Nyi Ma Zun
သက်ဝေ November 17, 2010 at 1:37 PM
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ မောင်နှမတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ် ဆုတောင်း မှတ်ချက်များအားလုံးအတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်...။ Facebook မှာ ဆုတောင်းပေးသွားသူများ ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်...။ တောင်းပေးတဲ့ဆုတွေ အားလုံးနဲ့ ပြည့်စုံရပါစေ... ...
လသာည November 19, 2010 at 11:42 PM
Happy Anniversary !နော်။
မရောက်ဖြစ်တာနဲ့ ဆုတောင်းနောက်ကျသွားတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
မမသက်ဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံ ရာသက်ပန် မခွဲမခွာ ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးစွာ လက်တွဲနိုင်ပါစေ။ ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခနဲ့လည်း တလုံးတ၀ ပြည့်စုံပါစေလို့နော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 21, 2010 at 10:50 AM
ကြည်နူးစရာာ ကဗျာလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ Anniversary လေးဘဲနော်
ခုလို Anniversary နေ့ရက်မျိုး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ များစွာ ဆင်နွဲနိုင်ပါစေ..
စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနှင့် သုခပြည့်ဝသော မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင်